Ciidamada Difaaca Kenya oo sheegay in ay gobolka Jubbada Hoose ku dileen 52 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada Difaaca Kenya oo sheegay in ay gobolka Jubbada Hoose ku dileen 52 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan
April 21, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamada Difaaca Kenya oo sheegay in ay gobolka Jubbada Hoose ku dileen 52 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan. [Photo: Archive]
Nairobi-(Puntland Mirror) Ciidamada Kenya ayaa sheegay in 52 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan ay ku dileen weerar ka dhacay saldhig Al-Shabaab ay ku lahayd koonfurta Soomaaliya maanta oo Jimce ah, afhayeen milatari ayaa sidaa sheegay.
Kornayl Joseph Owuoth, oo ah afhayeen u hadlay ciidamada Difaaca Kenya, ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay magaalada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose.
“Howlgal ay hoggaaminayeen sirdoonku ayaa la fuliyay kadib ishaafalatayn goobaha argagixisada Al-Shabaab. Ciidamada dhulka oo ay taageerayaan madaafiic ayaa rasaas ku furay saldhiga intaas kadib,” ayuu afhayeenku ku yiri bayaan.
“Howlgal daba socday, wararka hore ayaa muujinaya in 52 argagixiso la dilay halka kuwo kale ay dhaawac la carareen.”
Qoryo, saddex walaxaha qarxa ah iyo waxyaabaha bumbooyinka laga sameeyo ayaa howlgalka lagu soo qabtay, sida uu sheegay Kornayl Joseph Owuoth.
April 21, 2017 Kenyan forces say 52 Al-Shabab fighters killed in Lower Juba
April 8, 2017 Kenya oo sheegtay in ciidamadoodu ay jasiirada Kudha ku dileen abaanduule Al-Shabaab ah
March 27, 2017 Ciidamada Kenya oo sheegay in ay 31 dagaalyahan oo Al-Shabaab katirsan ku dileen gobolka Gedo
Kenyan forces say 52 Al-Shabab fighters killed in Lower Juba
Puntland Presidential guard shot dead by unknown assailants in Galkayo town
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s parliament on Tuesday elected Saeed Abdullahi Deni as new president. Deni received 35 votes while his rival Asad Osman Abdullahi 31 took votes in a third round of voting held at parliament [...]
Raysulwasaaraha Soomaaliya oo xilkii ka qaaday saddex wasiir oo katirsan golihiisa wasiiradda
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Khamiis ah xilkii ka qaaday saddex wasiir oo katirsan golihiisa wasiiradda, sida lagu sheegay wareegto kasoo baxday xafiiska Raysulwasaaraha. Wasiiradda xilka laga qaaday ayaa kala [...]